အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့် | Steroid တစ်မျိုးအမှုန့် AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/cetilistat/အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
အပေါ် Posted 11 / 26 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် cetilistat. ဒါဟာရှိပါတယ်2မှတ်ချက်.
Cetilistat / Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့် / Cetilistat ကုန်ကြမ်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်ထုတ်လုပ်ထားသောဆေးဖြစ်သည်။ ပန်ကရိယ lipase - အူအတွင်းရှိ triglycerides ကိုဖြိုခွဲသောအင်ဇိုင်းကိုဟန့်တားပေးခြင်းဖြင့်ယခင် orlistat အမှုန့်အဟောင်းကဲ့သို့ပင်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒီအင်ဇိုင်းမပါဘဲ၊ အစာမှ triglycerides ကိုစုပ်ယူနိုင်သောအခမဲ့ဖက်တီးအက်စစ်များထဲသို့ hydrolyzed မလုပ်ရန်တားဆီးထားပြီးအစာမကြေဘဲထုတ်ယူနိုင်သည်။ လူ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာ cetilistat အမှုန့် orlistat အလားတူကိုယ်အလေးချိန်ထုတ်လုပ်ရန်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီးအစားအစာမှအဆီကိုစုပ်ယူသည်။ ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချရန်မူးယစ်ဆေးသည်အရံပစ္စည်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။
အမည် Cetilistat, Cetilistat အမှုန့်, Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
အရည်ပျော်မှတ် 72-76 ℃
သိုလှောင်ခြင်း Temp ။ 2-8 ℃
Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အကျိုးသက်ရောက်မှု / Cetilistat အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဝလွန်ခြင်းခေတ်မီစက်မှုထွန်းကားများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ဘေးဥပဒ်များနှင့်လက်ရှိအဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းသိရပါထက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကပိုသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Cetilistat အမှုန့် ဆေးတစ် lipase inhibitor အမျိုးအစားစဉ်းစားသည်။ အဆိုပါဆေးသင်ကတွေဟာအစာကြေကြဘူးနှင့် undigested အဆီအူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုအတွင်းခန္ဓာကိုယ်ရှောက်သွားပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်အစားအစာအတွင်းအဆီ၏ဇီဝြဖစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အဆိုပါတောင့တစ်ဦးအနိမ့်ကယ်လိုရီ, အနိမ့်အဆီဓာတ်စာနှင့်အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့သင့်လျော်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုနှင့်အတူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်အလေးချိန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျှော့ချထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးလက်စထရော, ဆီးချို, သွေးတိုးရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါအဖြစ်အခြေအနေများတားဆီးကူညီခြင်းနှင့်ပြုမူဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သောက်သုံးသော / Cetilistat သောက်သုံးသော
Cetilistat အမှုန့် ဆေးတောင့် form မှာလာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်း၏ဆေးဝါးအကြောင်းအရာ 60mg ဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အကွံဉာဏျအဘို့ဤဆေးဝါးမသုံးမီနှင့်လက်ျာသောက်သုံးသောတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်သွားပါ။ အဆိုပါတောင့နှုတ်ဖြင့်ယူနှင့်ရေအပြည့်အဝဖန်နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုမျိုနေကြတယ်။ လူနာယေဘုယျအားဖြင့်သူကစုပ်ယူခံရခြင်းမှကိုလောင်မဆိုအဆီတားဆီးနိုင်အောင်တစ်မုန့်ညက်နှင့်အတူကယူပြောသည်နေကြသည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်လူနာတင်းကြပ်စွာသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်ကပေးအပ်သောက်သုံးသော regimen လိုက်နာရန်နှင့်အများဆုံးသောက်သုံးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်အောင်လုပ်နေတာအဖြစ်ကိုကျော်လွန်ဘယ်တော့မှကြောင်းသေချာစေရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး / Cetilistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူအုပ်ဖြစ်ရမည်ရှိလျှင်, ဖိုအဖြစ်အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်:
Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှု / Cetilistat သတိပေး
23915 Views စာ
testosterone propionate အမှုန့်: အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသင်သိသင့်! အမြိုးသမီးမြား Primobolan (Methenolone Acetate) ယူလို့ရပါသလား?